အဆမတန်ကြီးမားရှည်လျားသော Hippie စားဆင်ယင် - Buddhatrends
ဆီးအနီ / S က ဆီးအနီ / M က ဆီးအနီ / L ကို အနီရောင် / XL jujube ဆီးအနီ / XXL ဆီးအနီ / XXXL ဆီးအနီ / 4XL ဆီးအနီ / 5XL ဆီးအနီ / 6XL စိမ်းပြာ / S က စိမ်းပြာ / M က စိမ်းပြာ / L ကို စိမ်းပြာ / XL စိမ်းပြာ / XXL စိမ်းပြာ / XXXL စိမ်းပြာ / 4XL စိမ်းပြာ / 5XL စိမ်းပြာ / 6XL ဘရောင်း / S က ဘရောင်း / M က ဘရောင်း / L ကို ဘရောင်း / XL ဘရောင်း / XXL ဘရောင်း / XXXL ဘရောင်း / 4XL ဘရောင်း / 5XL ဘရောင်း / 6XL အဝါရောင် / S က အဝါရောင် / M က အဝါရောင် / L ကို အဝါရောင် / XL အဝါရောင် / XXL အဝါရောင် / XXXL အဝါရောင် / 4XL အဝါရောင် / 5XL အဝါရောင် / 6XL ဆင်စွယ် / S က ဆင်စွယ် / M က ဆင်စွယ် / L ကို ဆင်စွယ် / XL ဆင်စွယ် / XXL ဆင်စွယ် / XXXL ဆင်စွယ် / 4XL ဆင်စွယ် / 5XL ဆင်စွယ် / 6XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL အဖြူ / 6XL နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / S က နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / M က နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / L ကို နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / XL နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / XXXL နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / 4XL နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / 5XL နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် / 6XL ခရမ်းရောင် / S က ခရမ်းရောင် / M က ခရမ်းရောင် / L ကို ခရမ်းရောင် / XL ခရမ်းရောင် / XXL ခရမ်းရောင် / XXXL ခရမ်းရောင် / 4XL ခရမ်းရောင် / 5XL ခရမ်းရောင် / 6XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XXL Black က / XXXL Black က / 4XL Black က / 5XL Black က / 6XL မီးခိုးရောင် / S က မီးခိုးရောင် / M က မီးခိုးရောင် / L ကို မီးခိုးရောင် / XL မီးခိုးရောင် / XXL မီးခိုးရောင် / XXXL မီးခိုးရောင် / 4XL မီးခိုးရောင် / 5XL မီးခိုးရောင် / 6XL လိမ္မော်ရောင် / S က လိမ္မော်ရောင် / M က လိမ္မော်ရောင် / L ကို လိမ္မော်ရောင် / XXL လိမ္မော်ရောင် / XXXL လိမ္မော်ရောင် / 4XL လိမ္မော်ရောင် / 5XL လိမ္မော်ရောင် / 6XL အလင်းကိုခရမ်းရောင် / XL အလင်းကိုခရမ်းရောင် / 4XL အလင်းကိုခရမ်းရောင် / 5XL အလင်းကိုခရမ်းရောင် / 6XL
: P *** s ကို
ma ကြီးမားသော carrure à Bien longue et adaptée: Cette ငါ့ကို satisfait à merveille ဝတ်လုံ။ je mesure 1 mètre 80 et pèse 95 ကီလိုဂရမ်။ Elle est très Jolie et la couleur Que j'ai choisie est si Belle ။ သနားခြင်းကရုဏာ au vendeur, ကရုဏာ, မွန် Mari va ငါ့ကိုပေးအပ်ခြင်းသြစတေး5/5étoiles!
Eleni-ဟယ်လင် G. အ
ထူးမြတ်သောအရောင်အဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာငါအမိန့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြီးနှင့်အချို့သောမသိသောအကြောင်းပြချက်အဘို့အကြှနျုပျ၏စားဆင်ယင်ငါ့အစာတိုက်ကပေးပို့တဲ့ဘယ်တော့မှခံခဲ့ရပေမယ့်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအဖြစ်အပျက်သင်အကြောင်းကြားတဲ့အခါသင်ချက်ချင်းအမြန် mail ဖြင့်အခြားတဦးတည်းငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ ကိုယ့်သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါသည်သင်တို့၏ဖောက်သည်တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ငါ၏ဒုတိယအလို့ငှာထားရှိ!
ဒီစားဆင်ယင်လက်ခံရရှိနှင့်ချစ်ကြတယ်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ပိုကောင်းသလိုအခြားသူများနှင့်အတူသဘောတူသည်။ ငါ 5X ၌ဝယ်ပေမယ့်ရက်ရက်ရောရောဖြစ်ခြင်း, လာမယ့်အရွယ်အစားကိုဆင်း၌မဝယ်လိမ့်မယ်။ ငါဝယ်သည်အခြားစားဆင်ယင်လက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်။ ယခုပင်လျှင်မယ့်နေရောင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖွစျလိမျ့မညျသောပဝါကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်။
အံ့သြစရာစားဆင်ယင်! ငါတကယ်အရောင်နှင့် texture နဲ့တူ! ငါလိုချင်ရုံနဲ့တူဿုံထိုင်တော်မူ၏။ တစ်ခုတည်းသောမှတ်ချက်: အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောလည်ပင်း။ ငါ့ဦးခေါင်းအရွယ်အစား 55 စင်တီမီတာ, ဒါဟာခဲ fit ။ စားဆင်ယင်ကြာကြာကြီးလျှင်ငါချင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အမြင့် 163 စင်တီမီတာစားဆင်ယင်ရုံလယ်ပိုင်းနွားသငယ်ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ Delivery2ရက်သတ္တပတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျစတိုးဆိုင်နှင့်ရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါသည် !!! ငါပျော်ရွှင်ဖောက်သည်ဖြစ်၏။
အံ့သြဖွယ်, ဒီစားဆင်ယင်ချစ်ကြတယ်။ တစ်ဦးလက်အိတ်နဲ့တူကိုက်ညီ! ငါသေချာပိုပြီးအမိန့်ပါလိမ့်မယ်။
ငါမီတာ (စံအရွယ်အစား) ကို ယူ. လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကဿုံကိုက်ညီ! နှင့်အတိအကျဓာတ်ပုံနဲ့တူလှပါတယ်။ ကျွန်မကြာမြင့်စွာကဒီစားဆင်ယင်၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ပေမယ့်ဖြတ်ပြီးစတိုးဆိုင်များတွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာပါ! အရည်အသွေးပူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလက်ရှည်သော်လည်းပေမယ့်နွေရာသီအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါ့ပါးထည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အစံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လျှင်အဖြစ်ကျေးရွာများ၏အရွယ်အစား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါဒုတိယဝယ်သော်လည်းတစ်ဆင် :) ကဲ့သို့ဝမ်းသာတယ် :)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇင်အဆမတန်ကြီးမားလဲမှို့ Dress $75.65 $89.00
ပန်း Gradient လဲမှို့များနှင့်ပိတ်ချော Dress $73.95 $87.00
စပျစ်သီးကို V-လည်ပင်းလဲမှို့ပိတ်ချော Maxi Dress $75.65 $89.00
ဇင်ဥယျာဉ်အင်ပါယာခါးလောက်မီဒီ Dress $56.95 $67.00
နှလုံးသားလဲမှို့ပိတ်ချောဖြူ Maxi Dress မှာ Hippie $91.80 $108.00
အဆမတန်ကြီးမားပိတ်ချောမီဒီ Dress $67.15 $79.00